तिनीहरूले दूषित हावा सफा गर्न अनुमति धेरै आपतकालीन अवस्थामा मास्क आवश्यक पर्दछ। यो समारोह फिल्टर कार्य गर्दछ। समय यो हावा गुणस्तर सफा गर्न सक्नुहुन्छ देखि छैन, यो प्रतिस्थापित हुनुपर्छ। उपकरणहरू आपतकालीन अवस्थामा सहयोग।
फिल्टर मास्क एक उच्च गुणवत्ता वा समग्र खोल सिलिण्डर फारम बहुलक-धातु छ। यो उपकरण एक कण फिल्टर र शुल्क (अवशोषण कोर) comprises। आधार अभ्रक को फाइबर, ग्लास फाइबर र कृत्रिम समावेश जो सेलूलोज फाइबर को एक रूपरेखा र फिल्टरिङ घटक संग पहिलो बहु-घटक सामाग्री छ।
मास्क उपकरण हामीलाई यो कसरी काम गर्छ बुझ्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ बिजुली डिजाइन electrostatics प्रयोग गरेर कणहरु कब्जा गर्न फिल्टर सामाग्री चार्ज। आकार सेल strainer छन् कि धूलो कणहरु देखि हावा शुद्धीकरण, mechanically गरिन्छ।
सक्रिय कार्बन एक अवशोषण फिलर मिश्रण उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छ। यो फिल्टर गुण सुधार गर्न आवश्यक छ। आरोप पनि अवशोषक तह, कार्बन थपिएको सक्रिय समावेश जो भनिन्छ। आफ्नो मद्दत संग, यो जम्मा घटक सुधार गर्छ। यस्तो additives धातु आक्साइड र लवण समावेश गर्नुहोस्। यस्तो उपकरण हावा मास्क गुणस्तरीय फिल्टर गर्न अनुमति दिन्छ।
ग्याँस मास्क को संरचना
सुरक्षा उपकरण मानव प्रदूषक विरुद्ध सुरक्षा प्रदान, धेरै महत्त्वपूर्ण भागहरु समावेश छ। आवश्यक घटक को संख्या समावेश:
अगाडि रबर भाग: जडान पाइप र वाल्व बक्स समावेश;
हावा फिल्टर तिनीहरूलाई प्रदान गरिएको छ किनभने मास्क सबै भागहरु आवश्यक छ। केही भागहरु देखिने कमजोरीहरू भने, यो तिनीहरूलाई विस्थापन गर्न आवश्यक छ।
सुरक्षा को धेरै कक्षाहरू छ "चलनी" कण फिल्टर को प्रकार द्वारा:
भद्दा धूलो ढिलाइ;
गरौं गर्दैन धूलो, धुवाँ, कुहिरो;
यो ठीक mists, कुहिरो, धुवाँ, ब्याकटेरिया र भाइरस विरुद्ध सुरक्षा।
जो एक फिल्टर चयन गर्न लागि मास्क आपतकालीन को प्रकार मा निर्भर गर्दछ। कुनै पनि अवस्थामा, यन्त्र दूषित हावा को प्रभाव बाट जोगाउन हुनेछ। त्यहाँ अमोनिया ग्यास मास्क फिल्टर गर्न विशेष उद्देश्य उदाहरण को लागि एक माध्यम हो।
निम्नानुसार ग्याँस मास्क फिल्टर canisters चिन्ह लगाइएको गर्न सकिन्छ:
एक (खैरो): पेट्रोल, स्ट्रोक, एसिटोन, बेन्जिन, toluene जोगाउँछ।
को (पहेंलो): क्लोरीन, सल्फर डाइअक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन sulphide, फोस्जेन सम्झना छैन।
टी (पहेंलो-कालो): देखि पारा र जैविक पदार्थ सुरक्षित राख्दछ।
केडी (खैरो) अमोनिया, हाइड्रोजन sulfide सम्झना गर्छन।
ई (कालो) आर्सेनिक, फस्फोरस को hydrides को ingress विरुद्ध सुरक्षा।
एम (रातो) Organics, अमोनिया, एसिड ग्याँसहरु संग कार्बन मोनोअक्साइड सम्झना गर्छन।
SB (सेतो) कार्बन मोनोअक्साइड देखि एक व्यक्ति सुरक्षित राख्दछ।
BKF: एसिड ग्याँसहरु, जैविक vapors, aerosols, आर्सेनिक को hydrides, फस्फोरस सुरक्षित।
बक्से दूषित हावा विरुद्ध सुरक्षा को अवधि निर्धारण जो, ठूलो मध्यम र साना मात्रा छन्। तिनीहरूले एक कण फिल्टर छ भने, सञ्चालनको समय कम छ। तल को सेतो रंग - यो सेतो ठाडो धर्काहरू, र साना बक्से उपस्थिति पत्ता सकिन्छ। बक्से ए, बी, सी डी, डी, त्यसैले अंक3द्वारा denoted एक कण फिल्टर बिना ई, आफ्नो चिह्नों प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ - A3B3Reactor2। यस मामला मा, ग्यास मास्क3लागि फिल्टर सुरक्षा वर्ग प्रकार ए ग्यारेन्टी यस्तो विवरण 3-5 वर्ष भित्र हुन सक्छ छ।
नयाँ उपकरणहरू को पद
ग्याँस मास्क लागि फिल्टर को वर्गीकरण नयाँ प्रजाति फरक रंग र अंकन अक्षरहरू हुन सक्छ। यी नियमहरू ईयू संग harmonized छन्। त्यहाँ निम्न संकेतन हो:
एक (खैरो) जैविक ग्याँसहरु, 65 डिग्री माथिको vapors विरुद्ध सुरक्षा।
बी (खैरो): अकार्बनिक ग्याँसहरु देखि, केवल अपवाद कार्बन छ सुरक्षा।
कोलोराडो (बैजनी) कार्बन मोनोअक्साइड विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
ई (पहेंलो): एसिड ग्याँसहरु, एसिड वाष्पीकरण सम्झना छैन।
K (हरियो): व्यक्ति अमोनिया र amine यौगिकों सुरक्षित छ।
पी (सेतो): ब्याकटेरिया, भाइरस जोगाउँछ।
Hg (रातो): आवश्यक पारा वाष्प र अस्थिर यौगिकहरु हटाउन।
बन्चरो (खैरो): जैविक सामाग्री छोडेर छैन।
Sx (बैंगनी) विषालु toxins फिल्टर।
Reaktor (सुन्तला): रेडियोधर्मी आयोडिन आइसोटपहेर्नुहोस् विरुद्ध सुरक्षा।
आधुनिक फिल्टर मास्क हावा मा हानिकारक पदार्थ देखि मानिसहरूलाई को गुणस्तर सुरक्षाको लागि आवश्यक छ।
सुरक्षा उपकरण जहाँ हावा 18% भन्दा कम अक्सिजन समावेश गर्छ, र प्रदूषक उच्च एकाग्रता मा फेला एक कोठा मा हुनु हुँदैन। हावा गर्न उपयुक्त हुने ताकि फिल्टर बक्स चयन गर्नुपर्छ।
धुवाँ, मार्फत मान्छे पकड गर्न आवश्यक छ भने जहाँ प्रधान कार्बन मोनोअक्साइड, आवश्यक कं2लेबलिंग ग्रेड सेतो। जैविक र एसिड ग्याँसहरु को मिश्रित जोडी दूषण मा BKF को बक्स चयन गर्नुपर्छ। ग्याँस फिल्टर संग gassed प्रयोग respirators संग।
जब प्रतिस्थापन आवश्यक छ?
कार्य समय फ्रेम बारेमा जानकारी फिल्टर मास्क लागि एउटा सन्दर्भ कामको रूपमा सेवा गर्नेछन्। भण्डारण पटक यो सबै मोडेल निर्भर, फरक हुन सक्छ। त्यहाँ फिल्टर प्रतिस्थापन लागि आवश्यकता स्थापित गर्न अनुमति निर्धारण लागि धेरै विधिहरू छन्। यो प्रक्रिया जब कूटवेश सजिलै देखिने विषाक्त ग्याँस अन्तर्गत आवश्यक छ। यसलाई स्पष्ट उच्च एकाग्रता ग्याँसहरु महसुस गरिएको छ किनभने विधि खतरनाक छ।
उपकरणको वजन परिवर्तन गर्दा फिल्टर प्रतिस्थापन आवश्यक छ। यो विकल्प बक्से कि कं कब्जा लागि उपयुक्त छ। तिनीहरूले कम चिस्यान मा सञ्चालन र उच्च मा काम छैन। कारण चिस्यान र बाध्यकारी उपकरणहरू को अवशोषण गर्न वजन ठूलो हुन्छ।
प्रतिस्थापन प्रयोग केही समय पछि आवश्यक हुन सक्छ। एकाइ 100 घण्टा प्रयोग भएको थियो भने विकल्प लागि मास्क ब्रान्ड जी उपयुक्त छ, बक्स प्रतिस्थापित हुनुपर्छ। प्रत्येक मास्क आफ्नो आफ्नो जीवन हुन सक्छ। यो व्यक्ति को सुरक्षा असर रूपमा, तिनीहरूलाई पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
स्थापना नयाँ फिल्टर अनुसूचीमा बाहिर गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, बक्स हावा मा हानिकारक घटक धेरै यदि बारम्बार परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रक्रिया बाहिर र प्रयोगशाला अध्ययन पछि छन्। त्यसपछि प्रयोग बसालेको तारीख फिल्टर गर्नुहोस्। फिल्टर काम अवधिको कम्प्यूटर मोडेलिंग तपाईं सहित तापमान र चिस्यान नकारात्मक कारक, परिभाषित गर्न अनुमति दिन्छ। प्रतिस्थापन समय तत्व निर्धारण गरिन्छ - सेन्सर। फिल्टर को सामयिक स्थापना तपाईं स्वास्थ्य गर्न क्षति बिना यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
भिडियो निगरानी र पहुँच नियन्त्रण प्रणाली सीसीटीवी स्थापना
सामाजिक पेन्सन के हो?
एफबीआई (एफबीआई): संक्षिप्त र चासो क्षेत्रको ट्रान्सक्रिप्ट
Altay मा स्की रिसोर्ट्स: तस्बिर र समीक्षा
व्यवहार को सेवा मा सिद्धान्त को अनावश्यक प्रयोग
अर्डर मा डिप्लोमा थियोसिस - विद्यार्थीलाई को समस्या एक अद्वितीय समाधान
यो मनोरञ्जन केन्द्र "स्वर्ण खाडी" (Pitsunda): वर्णन, समीक्षाएँ हलिडे
इल्या मेदवेदेव: सरकार को प्रमुख को छोरा को जीवनी